China FOTON C10 / C12 mveliso kunye nabenzi | Ifoto
Ukunciphisa Ubunzima 12T
Umkhweli / Indawo yokuhlala Ngowama-92 / 24-46
Ulwakhiwo loMzimba IMonocoque / iSemi-monocoque
Ulwakhiwo loMgangatho Ukungena ngaphakathi / kumgangatho osezantsi / amanyathelo amabini
Uqwalaselo lomnyango Amabini amabini ajika emnyango wamaphiko amabini
Olu luhlu luhambelana neinjini ezihlangana nomgangatho we-EURO II ukuya kumgangatho we-EURO V;
Injini yedizili / NG iyafumaneka
Olu ngcelele luyahambelana nosasazo olwahlukeneyo olususela kwincwadi yokuhambisa ukuya kugqithiso oluzenzekelayo;
Ukubandakanya ukuhanjiswa kweZF AllisionVoith Diwa.
Ngo-2017, iFoton AUV ihambise ibhasi yamandla acocekileyo ayi-1000 kwinkampani yeebhasi zaseYangon eMyanmar, ifezekisa owona myalelo mkhulu kwishishini leebhasi lasechina.
Iibhasi ze-Foton zihamba ngovavanyo olungqongqo lwezithuthi kunye novavanyo lwe-rollover ngaphezulu kwe-100 lamawaka eekhilomitha kwimeko yeendlela ezahlukeneyo kwaye phantsi kweemeko zemozulu eziqatha ezinje ngobushushu obuphezulu, ubushushu obuphantsi kunye noxinzelelo oluphantsi.